केयुले सुरू गर्‍यो नयाँ कोर्ष 'मास्टर्स इन बिजनेस एन्ड इकोनोमिक्स' :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
काठमाडौं युनिभर्सिटी स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट (कुसोम) ले नयाँ कोर्षमा पठनपाठन सुरू गर्ने भएको छ। ललितपुरस्थित कुसोमले स्नातकोत्तर तहमा 'मास्टर्स इन बिजनेस एन्ड इकोनोमिक्स 'एमबिइ' पाठ्यक्रम ल्याएको हो।
संसारभर अर्थशास्त्र र व्यवसायको एकीकृत अध्ययनको बढ्दो दायरालाई ध्यानमा राख्दै एमबिइ कोर्ष सुरू गरिएको कुसोमले जनाएको छ।
कुसोमका एसोसिएट डिन अच्युत वाग्लेका अनुसार यो कोर्ष व्यवसायलाई अर्थतन्त्र विश्लेषणसँग जोडेर गहिरो अध्ययन गर्न सकियोस् भनेर तयार पारिएको हो।
'नेपालमा सिकाइ र शिक्षण दुवै क्षेत्रमा व्यवसाय र व्यावसायिक विश्लेषणबीच गहिरो खाडल छ। यसले गर्दा प्रविधिका कारण नयाँ रोजगारी सिर्जना भइरहेका छन् भने भएका रोजगारी हराउँदै गएका छन्,' उनले भने, 'यस्तो अवस्थामा दुवै खाले रोजगारीको अवसर हुने किसिमको नयाँ पाठ्यक्रमको खाँचो देखेर हामीले एमबिइ सुरू गरेका हौं।
एमबिइ कस्तो कोर्ष हो?
युरोप, अमेरिकाका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमा एमबिइ पढाइ हुन्छ। अमेरिकाका हार्वर्ड विश्वविद्यालय, युनिभर्सिटी अफ सिकागो, युनिभर्सिटी अफ मिसिगन, अस्ट्रेलियाको मोनास विश्वविद्यालयमा स्नातकदेखि स्नातकोत्तर तहमा एमबिइ पढ्न पाइन्छ। क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयले भने एमबिइमा विद्यावारिधि पनि गराउँदै आएको छ। नेदरल्यान्डस् र भारतमा समेत एमबिइ अध्ययनको दायरा फराकिलो हुँदै गएकाले नेपालमा पनि यसको आवश्यकता महसुस गरेर भित्र्याइएको कुसोमको भनाइ छ।
वाग्लेका अनुसार व्यवसाय र अर्थशास्त्र बेग्लाबेग्लै पढाउँदा अर्थशास्त्रमा हुने तथ्य र तथ्यांक विश्लेषणसहितका विषयवस्तुसँग मानवस्रोत व्यवस्थापनका विषयवस्तु जोड्न मुश्किल भएको पाइयो।
'नेपालमा यसखाले कुनै कोर्ष रहेनछ पनि,' प्राध्यापक वाग्लेले भने, 'संसारको प्राज्ञिक क्षेत्रमा विस्तार भइरहेको यो पाठ्यक्रमबाट नेपालीहरू पनि लाभान्वित हुन्, तथ्यांकका आधारमा निर्णय गर्ने क्षमता विकास होस् र हाम्रो अर्थ र वित्तीय क्षेत्रमा विज्ञहरूको उपस्थिति होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले यो कोर्स ल्याएका हौं।'
यसबाट व्यवस्थापनमा चासो राख्नेले निर्णय लिँदा अर्थशास्त्रका मोडलिङ, समीकरण, तथ्यमा आधारित भएर गरिने विश्लेषण लगायत विषयवस्तुबाट मद्दत पाउन सक्नेछन्। त्यस्तै अर्थशास्त्र पढे पनि व्यवसाय र व्यवस्थापकीय ज्ञान नहुँदा रोजगारी अवसरमा संकुचन भएकाहरूलाई पनि यो पाठ्यक्रमले सहयोग गर्नेछ। त्यसैले यी दुई कोर्ष एकीकृत गरेर पढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको वाग्लेले बताए।
'यो पाठ्यक्रममा तथ्य र तथ्यांकको विश्लेषण सिकाइ तथा अध्ययन हुनेछ,' उनले भने, 'यसले हाल यो क्षेत्रमा रहेको दक्ष जनशक्ति अभावको पूर्ति गर्ने विश्वास छ।'
त्यस्तै यो पाठ्यक्रमले विदेशमा अध्ययन गर्न चाहनेलाई पनि निकै मद्दत पुग्ने डा. वाग्ले बताउँछन्। नेपालमा स्नातकोत्तर तह सकेर गएका धेरै विद्यार्थीले विदेशी विश्वविद्यालयमा सिधै विद्यावारिधि गर्न पाउँदैनन्। यहाँको पाठ्यक्रमले त्यहाँ विद्यावारिधि गर्न आवश्यक विषयवस्तु नसमेट्ने भएकाले विद्यार्थीले दोहोर्‍याएर स्नातक गर्नुपर्ने हुन्छ।
कुसोमले यो पाठ्यक्रम यो समस्यालाई मध्यनजर गरेर तयार पारेको डा. वाग्ले बताउँछन्।
'हामीले एमबिइको पाठ्यक्रम संसारका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमा हुने विषयवस्तुलाई ध्यानमा राखेर त्यहीस्तरको बनाएका छौं,' उनले भने, 'त्यसैले एमबिइ गरेर विदेशी विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधि गर्न कठिनाइ हुँदैन। दोहोर्‍याएर मास्टर्स गर्नुपर्ने बाध्यता कम हुन्छ।'
कसले पढ्ने एमबिइ?
अर्थशास्त्र, विज्ञान, इञ्जिनियरिङ र व्यवस्थापनमा ५० प्रतिशत वा २ जिपिए ल्याएर स्नातक सकेकाहरूले एमबिइ गर्न पाउनेछन्। इञ्जिनियरिङ पढेकाहरूलाई व्यवस्थापन पढ्न परे एमबिइ गर्न सक्नेछन्। त्यस्तै व्यवस्थापन पढे पनि अनुसन्धानमा सीप तथा ज्ञान बढाउन चाहनेले पनि एमबिइ गर्न सक्नेछन्।
'उदाहरणका लागि वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम मूल्यांकन र अनुमान गर्न नसके अबका दिनमा सबै हिसाबले चुनौती हुन्छ। अहिलेसम्म यो क्षेत्रमा हामीले तथ्यांक विश्लेषण गरेर मात्र निर्णय गर्न सक्ने अवस्था आइसकेको नहोला तर पछि त चाहिन्छ नै,' वाग्ले भन्छन्, 'एमबिइ पढेकाहरूमा व्यवस्थापनसँगै अर्थशास्त्रको ज्ञान पनि हने भएकाले यो क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिका रूपमा रहने छन्।'
एमबिइ कोर्ष सुरू गरेसँगै अब यही विषयका लागि विदेश गएर पढ्नुपर्ने बाध्यता कम हुँदै जाने पनि विश्वास कुसोमको छ। संसारका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयले एमबिइमा समावेश गरेका विषयवस्तुको सम्मिश्रण गरेर यो कोर्ष तयार भएकाले यो तुलनायोग्य भएको वाग्लेले बताए।
त्यस्तै कुसोममा एमबिइ पढाउने प्राध्यापक र फ्याकल्टी पनि धेरैजसो बाहिरका उत्कृष्ट विश्वविद्यालय पढेर आएका उनले जानकारी दिए। यो कोर्ष नियमित प्राध्यापकका साथै भिजिटिङ फ्याकल्टीबाट पनि पढाउने गरी तयार पारिएको छ।
'संसारका विभिन्न ठाउँमा उच्च तहको शिक्षा लिएर, विभिन्न क्षेत्रको कार्यानुभव भएका व्यक्तिहरूबाट विद्यार्थीले थुप्रै कुरा सिक्न सक्नेछन्,' उनले भने, 'यो एमबिइको शिक्षा बजारमा एकदमै उपयोगी हुनेछ।'
चार सेमेस्टर भएको स्नातकोत्तर तहको यो कोर्ष दुई वर्षको हुन्छ। कुसोमका अनुसार दुई वर्ष अध्ययनका लागि पाँचदेखि छ लाख खर्च लाग्नेछ।
कुसोमले आगामी फेब्रुअरी १५ सम्म एमबिइ कोर्षमा भर्ना खुलाएको छ र मार्चको अन्तिम सातादेखि पढाइ सुरू गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ ११, २०७८, ०५:४०:००